Dr: Baadiyow: Axaadiis la beeniyey ma jiro ee tafsiirka xadiiska ayaa la isku khilaafay”. | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Dr: Baadiyow: Axaadiis la beeniyey ma jiro ee tafsiirka xadiiska ayaa la...
Dr: Baadiyow: Axaadiis la beeniyey ma jiro ee tafsiirka xadiiska ayaa la isku khilaafay”.
Dr: Cabdiraxmaan Macalin Cabdulaahi Baadiyoow ayaa ka hadlay dood ka dhalay qudbub uu dhawaan Ka jeediyay dalka Jarmal Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha Xisbiga Wadajir.
Dr: Baadiyow ayaa is dultaagay in aysan haboonayn in la gaalaysiiyo qof muslim ah,aysana haboonayn in koox gaar ah ay is xijiso diinta Islaamka oo ay rumaysan yihiin dadka Soomaaliyeed.
“Sax ma aha, mana haboona in diinta Islaamka oo dadka Somaaliyeed wada rumeysanyihiin shakhiyaad gaar ah dadka ka xigsadaan” ayuu yiri Baadiyow.
Dr:ka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed Xiligaan la daala dhacayaan khilaafka siyaasadeed ee dalkaan raagaadiyay,balse aan loo baahnayn xiligaan in lagu burburiyo khilaaf diimeed sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu u soo jeediyay siyaasiyiinta,Culimada iyo shacabka Soomaaliyeed in ay joojiyaan is nacaybka,lana joogo xiligii Midnimada iyo Dowladnimada Soomaaliyeed.
Dr.Cabdiraxmaan Macalin Cabdulaahi Baadiyow Guddomiyaha Gudiga dib u heshiinta Beelaha Galmuduga oo qoraalkaan soo galiyay bartiisa Facebookiisa,ayaa dalka kula dardardaarmay shacabka Soomaaliyeed in ay ka fogaadaan kala qaybin.
Qaar ka mid ah culimada Soomaaliya ayaa dhaliilay hadal ku jiray khudbad uu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ujeediyey jaalliyadda Soomaaliya ee dalka Jarmalka. Hase yeeshee isagu waxa uu ku dooday in hadalkiisa si qaldan loo fahmay.